Umzi-mveliso weSithuthuthu sabantu abaDala
Isikuta sombane JB520
Isikuta sombane JB516B
Isikuta sombane JB525
I-E-Scooter JBHZ 01
I-E-Scooter JBHZ 02
I-E-scooter JBHZ 03
Isihlangu seBounce JB166
Ukuphulula umpu JB80010
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 52
Siyaziphepha ngabom ezi meko kuba xa bezizithuthuthu ezilula, kunqabile ukuba bafezekise ixabiso lemali. Ukuba ucwangcisa ukuchitha amakhulu eedola, emva koko unokukhetha isikuta sombane.
Ndikucebisa ukuba ujonge nezona scooter zombane zibalaseleyo kubantu abadala. Ziyabiza kakhulu, kodwa kumnandi ukuqhuba ujikeleze kwaye ayizukubandakanya ukukhaba kwakho.
Kulabo bahlala behla baye emsebenzini ngesithuthuthu, mhlawumbi izinto zokuhamba zikawonkewonke
Inobunzima nje nge-5.1 kg, kwaye iyagoba ngokukhawuleza kwaye ngokulula, oko kuthetha ukuba awunakuba nangxaki yokuyiphatha nawe.
Amavili esi sithuthuthu sikhulileyo enobubanzi obuyi-180mm, oko kuthetha ukuba banikezela ngozinzo olungummangaliso.
Uyilo lwazo luhlala ixesha elide kakhulu, oko kuthetha ukuba nokuba usebenzisa amavili e-PU yonke imihla, la mavili anokuhlala ixesha elide.
Ubungakanani bamavili buya kuqinisekisa ukuba esi sithuthuthu sikhawuleza kwaye siba bhetyebhetye kunezinye iithuthuthu ezifanayo kwintengiso
Esi sithuthuthu sikhethekileyo sihambelana kakhulu. Njengoko ubona kulo mfanekiso ungezantsi, unesiphatho esimiselweyo kwaye isiphatho sinokufakwa kuso. Indlela yokusonga igudileyo kwaye yomelele.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 56
Ukuphakama isithuthuthu esihlengahlengiswayo
Isikuta iJBHZ-56 sinokuxhasa ubunzima obukhulu ukuya kuthi ga kwiiponti ze-180. Isibambiso sinokuhlengahlengiswa okukhulu, enyanisweni, nabani na osuka kubantwana ukuya kubantu abadala angayisebenzisa.
Enye yezona zinto zibalulekileyo zale scooter, kunye nesizathu sokuba siyifake kolu luhlu, kungenxa yokuba i-absorber yothuso yeyesibini kuye.
I-JBHZ-56 ukuphakama kwesikuta esilungelelanisiweyo esime simi
Unokunqumla kumhlaba ombhoxo kwaye akukho nto uyivayo. Nditsho namavili aneebheringi ezikumgangatho ophezulu ezakhelwe ngaphakathi ukunceda ukuqinisekisa ukukhwela okugudileyo.
Iimbambo zokubamba isithuthuthu sinokubambelela ngokuqinileyo, oko kuthetha ukuba xa uqhuba kwindawo engqindilili, awuyi kuva ukungcangcazela kwezinto ezinzima.
Enye yezona zinto ziluncedo kakhulu yinkqubo yokuqhekeza kabini. Uninzi lwabantu lukhwele izithuthuthu, kodwa kwafumanisa ukuba kufuneka lucothe ngokukhawuleza.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 54
Rhoqo, kunokuba yinkqubo edibeneyo yokubetha umva ngokukhawuleza, ngakumbi ukuba awusebenzisi ubuchule bokukhwela. Lo ayizukuba ngumcimbi ngale scooter yokukhaba.
Ayisiyiyo kuphela eyakho brake esemgangathweni kwivili elingasemva, kodwa kukwakho nesandla esaphuka esakhelwe kwindawo yokubamba, evumela nolawulo olukhulu ngakumbi kwesi sikuta sokukhaba sabantu abadala.
Kuya kubakho indawo eyaneleyo kumgangatho ukuze ubonelele ngendawo eyaneleyo yeenyawo zakho, nokuba zinkulu kangakanani. Le scooter yeJBHZ-04 ngokulula yenye yezona scooter zintle kakhulu kwintengiso yokukhwela, kwaye awuyi kudana ngamava akho.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 53
Ngokwenyani le iya kuba sesona sikuta sitshiphu sinexabiso eliphantsi kolu luhlu, kodwa oko akuthethi ukuba sisikuta esibi, hayi nangaluphi na uhlobo lokucinga.
Le yenye yezona zinto zodwa zokukhatywa kwabantu abadala kolu luhlu ezingafuneki kwindibano nakubani na. Yitsale ngaphandle kwebhokisi kwaye ulungile ukuhamba.
Esi sikuta senziwe nge-aluminium ekumgangatho wenqwelomoya oko kuthetha ukuba ilula ngokulula, kodwa ikwathetha ukuba yakhelwe ukuhlala ixesha elide. Yenziwe yabakho sisakhelo sealuminium.
Ngelixa ngokubanzi kungacetyiswanga, ungasinika ngokulula esi sithuthuthu sikhulileyo kunkqonkqoza ezimbalwa kwaye siza kuphuma singadanga ekugqibeleni.
I-JBHZ-03 yakhelwe umntu omde. Unolungelelwaniso oluninzi lokuphakama kwiimbambo, ezenza ukuba kube lula ukukhwela. Iivili ezikhulu zikwabonelela ngozinzo olukhulu kumntu 'onzima' phaya.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 51
Isithuthuthu seKick 2-Wheel esisindayo esingasindi, i-T-bar emnyama eyomeleleyo ene-barbar ethambileyo yokubamba ine-3 yokuhlengahlengisa ukuphakama ngokulula okutshixa indawo yokubamba kunye nokubamba okungahambisiyo kubonelela ngokuhamba ngokukhululekileyo nangokukhuselekileyo Kuxhotyiswe ngenkqubo yokusonga enelungelo elilodwa lomenzi neliwela lula ukugcinwa kunye nokuthuthwa Umgangatho oqinileyo we-aluminium ine-anti-slip grip tape leyo.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 55
I-JBHZ-55 ixhotywe ngamavili amakhulu angama-200mm, enziwe ukomelela okuphezulu kunye ne-polyurethane ekumgangatho ophezulu, ke awunakukhathazeka ngokukhwela kwindawo embi.
I-JBHZ-55 yabantu abadala isithuthuthu esinye
Ngokwenene zilungele ukukhwela okungxamisekileyo. Ukuba abamelwane bakho "" baqhayisa "" phantsi kwezi meko, ke i-JBHZ-55 ngokuqinisekileyo yindlela yokuhamba.
Le modeli ikwaze nebhuleki yangemva eqhagamshelwe kumqheba wokuphatha nge-lever, ke uya kuziva ukhuselekile xa ulawula isithuthuthu esivela kwisiphatho.
Ikwanazo neewadi ezikhuselayo, ezinokukukhusela kunye nesikuta ngokwaso ekutshabalaliseni udaka okanye indawo ezimanzi, kodwa ukuba uyayinyathela ngonyawo lwakho, inokusetyenziselwa ukuphumla.
Isithuthuthu sabantu abadala JBHZ 57
Isikuta siphatheka kakhulu. Ngokuqinisekileyo, ngekhe islide kubhaka wakho okanye nantoni na enjalo, kodwa abayili bayakuqonda oku. Inkqubo yokusonga ikuvumela ukuba usonge isithuthuthu ngemizuzwana nje kwaye uyinxibe egxalabeni, usebenzisa umtya wegxalaba.
Abantu abakwicala elinzima, ngelixa bekhwele oku basaya kufumanisa ukuba isithuthuthu siyakwazi ukutyibilika phantsi ngesantya esikhulu, oko kuthetha ukuba isithuthuthu sikulungele ukuhamba kwakho mihla le nokuba ungubani.
Icala elisezantsi kuphela kwesi sikuta kukuba inyani ithatha kancinci ukuseta kanye ngaphandle kwebhokisi. Kodwa, nangoko, kukuqinisa nje izikrufu kwaye uya kuba ukulungele ukubetha ezitalatweni nokuba uhlala phi na.
“Ukuhambela eXiandu nase Sacrificin ...
Amashishini angamawaka alishumi anceda amawaka alishumi ...
UJinyun County's 33th yoLutsha kunye neChil ...
No1 Juxian RD, Huzhen Lijin Zoon Industrial, Huzhen Idolophu, Jinyu Zhejiang, China